A na-atụ anya na 70 puku mmadụ ga-esoro ha na YHT n'oge ezumike | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraA na-atụ anya na mmadụ iri puku mmadụ abụọ na iri puku mmadụ na isii ga-eme njem na YHT
03 / 10 / 2014 06 Ankara, 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Isi akụkọ, Turkey
A na-atụ anya na 70 puku mmadụ ga-esoro na YHT gaa n'oge ememme: N'ihi Eid al-Adha, enwere nnukwu ike na njem transcation. 5, nke na-ekpuchi oge ezumike na nke ezumike, emeela njem ndị ọzọ iji belata njem ụbọchị. Companieslọ ọrụ ụgbọ elu na-ahazi njem 400 ọzọ maka njem, bọs na ụgbọ oloko n'agbanyeghị ụgbọ elu ndị ọzọ, kwuru na ụlọ adịghị.
N’ime ubochi asaa nke Eid al-Adha, njem njem bu otu n’ime nsogbu ndi obodo amamịghe. Tikpen ụgbọ elu dị elu (YHT), ebe ikuku na-agwụ, ụgbọ ala na ụgbọ njem ụgbọ mmiri fọdụghị obere ohere. Companieslọ ọrụ na-ahazi ọtụtụ njem ndị ọzọ iji gbochie ndị na-eme njem ezumike ahụ ịta ahụhụ n’oge njem ha n’oge Eid al-Adha.
THY na ndị ụgbọ elu onwe ha, 3-8 October Eid al-Adha ezumike, iji gbochie ndị njem inwe nsogbu ịchọta ụgbọ elu n'ime ụgbọ elu na nke mba, yana ụgbọ elu ndị dị adị ga-eme ka ụgbọ elu ndị ọzọ dị nso na 400. Flightsgbọ njem ndị ọzọ kachasị ezumike n'oge ezumike, Istanbul Sabiha Gokcen based Pegasus ga-ahazi ụgbọ elu. Ejiri njem ụgbọ elu nke 36 na mkpokọta 86 na mba ahụ, n'ihi oke ịrị elu na larịị ụlọ na nke mba ụwa n'oge Eid al-Adha, 1-12 ga-ahazi ụgbọ elu ndị ọzọ na 196 na ụgbọ elu ụgbọelu, Republic of Northern Cyprus na ụgbọ elu 69 na ụgbọ elu mba ụwa.
N'oge ezumike ahụ, Atlasjet ga-eme ụgbọ elu ndị ọzọ gaa Antalya na Bodrum na Turkey na gaa 28 n'ọtụtụ ebe mba ụwa, ọkachasị Turkish Republic of Northern Cyprus na Kuwait. Onur Air ga-ahazi ụgbọ elu ndị ọzọ dị na Izmir, Bodrum, Dalaman na Antalya n'oge ezumike ma ga-enyekwa ụgbọ elu buru ibu na ụgbọ elu ya. Companylọ ọrụ ahụ ga - eburu 03 puku mmadụ n'oge ezumike n'etiti October 07-55.
Beforebọchị tupu ụbọchị Eid al-Adha, enwere ụgbọ ala ụgbọ oloko na ụgbọ oloko dị egwu. Karịsịa ụmụ amaala chọrọ iji oge ezumike ahụ n'obodo ha, feere n'ọdụ ụgbọ ala na ndị na-ere ahịa jupụtara ụgbọ elu ụbọchị 4 ikpeazụ. Tuğçe Altun, onye ọrụ gọọmentị njem mgbasa ozi Nilüfer, rụtụrụ aka na ha haziri ọdụ ụgbọ elu na nkeji oge wee kwuo, “nkezi 5 mpaghara ga-enwe ihe karịrị narị ụgbọ elu atọ kwa ụbọchị. N'oge nchegharị nke ọnwa Ramadan, oke nke ebe ndị dị n'ụsọ osimiri dị elu na ụba nke mpaghara ime anyị mere n'oge ezumike a. ” A na-erere nkọwa nke GMT'de 2-3 October na 7-8 Ọktọba ọ bụla akọwapụtara. YHTs ga-ebu ihe dị ka 12 puku ndị njem kwa ụbọchị, gụnyere 10 n'etiti Ankara-Istanbul, 14 n'etiti Eskişehir-Ankara, 4 n'etiti Ankara-Konya na 40 ụgbọ elu n'etiti Eskişehir-Konya. 17, nke na-ekpuchi oge a na-eme tupu ememme na nke ememme, ka a na-atụ anya iji ya gaa ihe dị ka puku mmadụ na NWT na NWT.
6 na-eme atụmatụ dịka puku mmadụ.
Ọtụtụ puku mmadụ 150 kpaliri otu Ụbọchị Ịdị ọcha dị ezigbo mkpa na İZBAN
Ngwukpo 2'er nke 24'er Na-ata Ahụhụ Maka Ọkụ na Kayseri
PTT 5 iji mee ka otu puku mmadụ rụọ ọrụ
Ha amaghi ihe site na mberede YHT Mgbe mmadu 9 nwuru na Ankara
Ihe ọghọm Mazị mmadụ 9 na-ebido taa
ụlọ ọrụ ụgbọelu
Ụgbọ mmiri Locomotive ejiri ụgbọ mmiri TMO Pier (Video) dakwasị ya.
Istanbul KadıköyIkpeazụ tram la
12 Ọ bụrụ na onye ahụ anwụọ, onye ọkwọ ụgbọala na onye na-egbochi mgbochi
Minista nke njem nke Iran Ali Nikzad na YHT na-eme njem
Njem ụbọchị site n'ụlọ ruo n'ụlọ akwụkwọ na YHT